Nwunye aka na-achị steeti Anambra bụ Oriakụ Eberechukwu Obianọ akpọkuola ndị ụka Kraịst ka ha jisie ike n'ikpe ekpere maka ihuọma na odudu nke Chineke Nna na steeteti ahụ, ma rịọkwa ha ka ha gaa n'ihu ịkwado ọchịchị steeti ahụ.
Oriakụ Obianọ kpọrọ oku a n'ụlọ ụka St. Andrew Awada, Dịọsiisi nke Ọnịsha nke ụka Metọdiisiti n'ala Naịjiria n'ofufe nro ịchụ aja ekele "Ezinne na Eziada".
Ọ kpọpụtasịrị ihe dị iche iche ọchịchị nọ ugbu a na steeti ahụ mepụtagoro kemgbe o jiri malite, tinyere nke òtù ya bụ CAFE mepụtagokwara, ma kwe nkwa na ya bụ ọchịchị Obianọ ga na-aga n'ihu inye okpukperechi na ụka dị iche iche na steeti ahụ nkwado iji hụ na ezi ebumnobi ya banyere ndị Anambra pụtara ihè.
Na mbụ n'okwuchukwu ya n'ofufe nro ahụ, Bishọọpụ ụka Metọdkisiti na Dịọsịịsi Ọnịcha bụ 'Bishọọpụ Livinus Ọnụagha onye gbadoro ụkwụ n'isi okwu na-asị: "Anyaukwu na ọchịchọ nke onwe", kpọkuru ndị otu Kraịst ka gbanahị ihe ihe ndị ahụ n'ihi na ha megidere iwu na ọchịchọ nke Chineke. Ya bụ nnukwu onye ndu ụka toro gọvanọ Willie Obianọ na oriakụ ya n'ihi ezi mmekọrịta ha na ndị ụka iji wee hụ na e nwere mwulite ezi ọnọdụ nye ụmụafọ steeti ahụ, kwuru na ihe dị iche iche a ga-eji kwupuru ọchịchị ahụ gụnyere ezi nchekwa o wetegoro, ịkwụ ndị ọrụ ụgwọ ọnwa n'oge, inwogharị ngalaba ọrụ ugbo na ngalaba agụmakwụkwọ na steeti ahụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ma kwezie nkwa na ndị ụka ga-aga n'ihu n'inye ha nkwado na ikpere ha ekpere.
Ihe pụtakarịchara ihè na mmemme ahụ bụ ukwe pụrụ iche ekwere site n'ọnụ ndị ọbụ abụ, tinyere iji akwa ndị nne wee chọọ oriakụ Obianọ mma, bụ nke nwunye bishọọpụ ahụ bụ Dikọneesị Comfort Ọnụagha mere.